Bishnu – Palpapati
Home > Articles Posted by Bishnu
मालारानी मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित पाल्पापाटी डट.कम. का लागि प्रकाशक : विष्णु प्रसाद घिमिरे कार्यालय: तानसेन-पाल्पा¸ ५ नं. प्रदेश-नेपाल सम्पर्कः ९८५७०६०७६१ इमेलः shreenagarnewsmedia[at]gmail.com
May 10, 2021 Bishnu15
काठमान्डौं । २७, बैशाख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएका हुनुभएको छ । विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसदबाट बहुमतले अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त हुनुभएको हो । प्रस्तावको पक्षमा ९३ मत परेको छ । प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहन ओलीले १३६ मत पाउनुपर्ने थियो । संसदको सबभन्दा ठूलो दल एमालेका १२१ सांसद छन् । तर […]
May 6, 2021 May 6, 2021 Bishnu29
पाल्पा । २३, बैशाख ०७८ सुनिल कार्की । पाल्पाको तानसेनमा निर्माण भएको निशान भगवती मन्दिरको प्रधान सेनापति पुर्णचन्द्र थापाले उद्घाटन गर्नुभएको छ । कोरोना संकट ब्यवस्थापन केन्द्र डिसिसिएमसीको मापदण्ड अनुरुप सामाजिक दुरी कायम गरि प्रधानसेनापति थापाले मन्दिरको उद्घाटन गर्नुभएको हो । जिल्ला सदरमुकाम तानसेनको दरबार परिसरमा निर्माण भएको मन्दिर आकर्षक बगंैचा सहित दुई तलाको निर्माण […]
May 5, 2021 Bishnu25
पाल्पा । २२, बैशाख । ०७८ नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पा शाखाको दोस्रो बैठक बुधवार भुर्चअल प्रविधिबाट सम्पन्न भएको छ । शाखा अध्यक्ष रेखीराम रानाको अध्यक्षतामा संचालित बैठकले कोरोना जोखिम थप बढ्दै गएको र अग्रपंक्तिमा रही काम गर्ने पत्रकारहरु जोखिममा रहेकोले महासंघको तानसेन मेहल्धारा स्थित भवनमा ५ बेडको आइसोलेसन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । अक्सिजन […]
May 4, 2021 May 4, 2021 Bishnu34
पाल्पा जिल्लामा पछिल्लो समयमा दिन प्रति दिन कोरोना संक्रमितको संख्या थपिदै गईरहेको छ । रिब्दीकोट गाउपालिकाले कोरोना संक्रमण न्यूनिकरण तथा व्याबस्थापनका लागि विभिन्न कार्य गर्ने निणर्य गरेको छ । स्वास्थ्य संयोजक सुनिल अधिकारीका अनुसार रिब्दीकोट गाउपालिकामा कोरोना नियन्त्रणको लागि खसौलीमा ५ बेडको कोभिड उपचार केन्द्र,देउरालिमा २० बेडको आईसोलेसन केन्द्र तयार गरीएको छ । त्यसैगरी कुसुमखोलामा […]
पाल्पाका स्थानीय तहहरुमा, कोरोना संक्रमितको लागि १ सय ४० वेड तयार
May 4, 2021 Bishnu64
विष्णु घिमिरे /सुमन कार्की पाल्पा, २१ बैशाख । ०७८ पाल्पा जिल्लाका स्थानीय तहहरुले १ सय ४० वेडको कोरोना अस्पताल बनाएका छन् । जिल्लाका १० स्थानीय तहहरुले अधिकांशले आफ्नै कोरोना अस्पताल बनाएका छन् भने केही स्थानीय तहहरुले अन्य अस्पताल संगको समन्वयमा कोरोना अस्पताल संचालन गरेका छन् । तानसेन नगरपालिकाले पाल्पा अस्पताल संगको समन्वयमा कोरोना संक्रमितका लागि […]
पाल्पामा ४ सय ७० जना संक्रमित होमआइसोलेसनमा
May 3, 2021 Bishnu37
पाल्पा २०, बैशाख । ०७८ पाल्पा जिल्लामा सोमबार बेलुका सम्ममा ४ सय ७० जना कोरोना संक्रमित होमआइसोलेसनमा बसेका छन् । स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका अनुसार सोमबार सम्ममा ५ सय ८ जना कोरोना संक्रमित देखिएकोमा ४ सय ७० जना आफ्नै घरमै आइसोलेसनमा बसेका हुन् । त्यसैगरी अस्पतालमा उपचारारत भने ३८ जना मात्र रहेका छन् । सोमवारमात्र पाल्पामा […]
सोमबार पाल्पामा ७३ जनामा कोरोना संक्रमण
May 3, 2021 May 3, 2021 Bishnu44
पाल्पा २०, बैशाख । ०७८ पाल्पामा सोमबार ७३ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका अनुसार ९७ जनाको कोरोना परीक्षणमा ७३ जनामा संक्रमण देखिएको हो । यो संगै पाल्पामा कोरोनाका संक्रिय संक्रमितहरुको संख्या ५ सय ८ पुगेको छ । सोमवार माथागढीका ३, रामपुरका २, पूर्वखोलाका ५, रैनादेवीका १ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो […]
बगनासकालीमा संक्रमितको घरघरमै स्वास्थ्य सामाग्री वितरण
April 30, 2021 Bishnu124
पाल्पा । १७ बैशाख, ०७८ बगनासकाली गाउपालिका पाल्पाले कोरोना संक्रमितका घरघरमा स्वास्थ्य सामाग्री वितरण सुरु गरेको छ । गत बैशाख १३ गते गाउकार्यपालिकाको निर्णय अनुसार संक्रमितहरुको घरमै पुगी स्वास्थ्य सामाग्री वितरण सुरु गरिएको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ । विहीवार देखी कोरोना संक्रमित भई घरमै आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितहरुको लागि स्वास्थ्य सामाग्री वितरण गरिएको हो । बगनासकाली […]
April 26, 2021 Bishnu91
पाल्पा १३ बैशाख बगनासकाली गाउपालिका पाल्पाको सोमबार कार्यपालिका बैठक बसेको छ । गाउपालिकाका उपाध्यक्ष सरस्वती चिदीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि भोली देखी गाउपालिका भित्रका सबै शैक्षिकसंस्थाहरु बैशाख २० गते सम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । गाउपालिकाका प्रवत्ता लक्ष्मी अधिकारीका अनुसार कार्यपालिका वैठकले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरुलाई अनिवार्य १४ दिन […]
April 26, 2021 Bishnu52